Top 20 MP4 Players y
> Resource> tọghata> Top 20 MP4 Players
Apụghị egwu MP4 faịlụ na kọmputa gị, windows ekwentị, ma ọ bụ Windows Media Player? Ọ bụrụ otú ahụ, i nwere ike lelee ngwọta ebe a. E nwere ngwọta ndị dị iche awa na isiokwu a. Ị nwere ike na-agbalị ma otu si iji kpezie nsogbu gị MP4 playback nsogbu dị ka gị onwe gị na mmasị.
Part 1: Top 20 MP4 Players maka Mac, Windows, iOS na Android
Part 1.1: Top 5 MP4 Players maka Windows
Part 1.2: Top 5 MP4 Players maka Mac
Part 1.3: Top 5 MP4 Players maka iOS
Part 1.4: Top 5 MP4 Players maka Android
Part 2: Download Videos Free na Wondershare AllMyTube
Ọhụrụ ntọhapụ nke windows 10 onye ọ bụla na echerekwa faịlụ formats nakwa dị ka egwuregwu na nwere ike igwu ha. Ka ọ dịgodị onye ọ bụla ka ga na-akpọ ha niile mmasị jams na MP4 usoro. Ọ bụ ngwa ngwa mfe na elu definition. N'ihi na 2015 anyị na-aga ndepụta nke 5 N'ihi na onye ọ bụla ikpo okwu, nke na-arụ ọrụ kasị mma, gịnị mere na ọ gaghị.
VLC bụ na-emeghe isi ọkpụkpọ na ọ bụ kacha na-emeghe iyi free format MP4 egwuregwu. Ọ gaghị dị egwu MP4 ma fọrọ nke nta ihe ọ bụla ị itu ya n'ụzọ nile ruo ndị kasị elu nke formats. Site mp3 ka avi, XviD, MP4, ka mkvs. Dị na 48 na-asụ asụsụ, fọrọ nke nta ọ bụla nwere ike irite uru site na nke a na-abụghị uru. VLC ọkpụkpọ-dịnụ gafee ọtụtụ nyiwe gụnyere Android, iOS, Windows na Linux nyiwe. Na mgbakwunye na ọ bụ na-emeghe ka skins na ọtụtụ customizations mere na ị na-eche nweta ume mgbe ọ bụla ọ ibu. VLC ọkpụkpọ bịa agba na a ohuru GUI maka Windows 8 version na agba ọtụtụ nke video formats ekwekọghị na Windows 8 dị ka: Blue-ray, DVD na VCD. Kpachara anya ezie na dị ka ọtụtụ si n'ebe, na-enwe olileanya ego na on ozi nkeonwe gị, kekọtachaa VLC ọkpụkpọ tinyere ndị ọzọ bloatware ma ọ bụ malware ghọgbuo gị. Ná ngwụsị nke Nke a bụ nkọwa Mmepụta aha na website-amasị-enyere gị aka tinyere. Ọ na-na-agaghị ekwu VLC nwere dịghị asọmpi, ma na kama ya arụmọrụ nlereanya na ala nke iji gafee nyiwe-eme ka ọ ndị kasị ewu ewu na-ahọrọ.
SMplayer bụkwa a cross n'elu ikpo okwu ọkpụkpọ na-eme ka elu maka ọchịchịrị n'akụkụ nke VLC ọkpụkpọ. Nke ahụ ziri ezi arụmọrụ. SMplayer nwere ike a nanị iji outdo ndị ọzọ na arụmọrụ naanị ya. Na ya size abịa na ibu-featherweight 80MB doo gị mmetụta oké banyere gị disk ohere nakwa dị ka gị ike ife efe na ala gafee codec n'elu ikpo okwu. Ya CPU itinye n'ọrụ bụ ihe na-erughị ọkara nke VLC ọkpụkpọ, nke bụ doro maka mmefu ego akwụkwọ na desktọọpụ ahịa. Ọ bụ na-akpụkpọ customizable ma na mma-anọ ike karịa Robbie Williams na kwa, dị ka ya ụzọ, enye dịgasị iche iche nke sobtaitel ndakọrịta. Ọ bụghị otú ahụ shabby maka ụwa nke abụọ kasị mma oghe isi video ọkpụkpọ
Mmepụta: Ricardo Villalba
The Sasquatch nke mgbasa ozi egwuregwu. O di nwute na ọtụtụ ndị kwuru na nke a nwere ike ịbụ otú ọ na-arahụ downhill si n'elu ntụpọ dị ka free MP4 Player ruru bloatware na ihe nke ụdị dị ka ya ewu ewu dị ka isi ọkpụkpọ maka media na South Korea-efego, Ọ bụ oké breezy iji ọbụna ma ọ bụrụ na a na iju ntọlite. Ọ dịghị agbasaghị oyi na kpụ ọkụ n'ọnụ n'akụkụ kamakwa eme ka elu maka ya na ibu ugboro.
Ọ na-adịghị na-egwu ihe niile, ma ọ dịghị na-egwu m achọ ịma ọma nso ihe niile ma na ọ bụrụ na ọ na-apụghị egwu ihe i nwere, ọ ga-n'ụzọ nkịtị ẹkedori a search maka a dị nso codec nke nwere ike na-enwe ike na-egwu gị ihe onwunwe .. Ọ bụ a ọkpụkpọ na abịa nke South Korea, na amanyere bụ iwu akụkụ nke ha online egwuregwu na-ekiri ihe omume. Gị otu achọ a free wụnye nke Gom ọkpụkpọ inclusively. Oge mbụ na-agba ọsọ a ọkpụkpọ bụ maka StarCraft 2 egwuregwu VLC mgbasaozi. Onwe m nwere ike ịgwa gị m na-ele ndị niile na iyi HD 1080p na-enweghị tearing, ndụ na agbasa ozi n'ikuku. O doro anya na Gom ọkpụkpọ bụ nnọọ ike ọkpụkpọ na ọtụtụ codecs.
4-Daum si PotPlayer
PotPlayer site Daum bụ dịtụ ọhụrụ ntọhapụ n'ime ngalaba nke video Player maka Windows. Kọrọ ndị ọhụrụ Dominator na a idaha ọ na-eme ime ihe ụfọdụ nke guzo n'elu ndị ọzọ na i nwere ike na-achọ ime a lee anya na. Ya nso nke formats bụ dị ka ọtụtụ dị ka ya osompi si. Ọ na-adịghị ekwe ka ka obosara a nso nke omenala skins ma ọ dịghị ka elu maka ya na ya ike na-nyere dị iche iche keyboard macros ịchịkwa gị ihe onwunwe nakwa echeta ebe ị hapụrụ n'ime a ụfọdụ video. Ụfọdụ ndị ọhụrụ na-agụnye akpọ 3D ihe onwunwe na Ọzọkwa, dị ka VLC, na-egwu mebiri emebi ihe onwunwe. Daum si PotPlayer bụ maa a na-ekpo ọkụ contender.
5-Media Player Omuma
Nke a free mgbasa ozi ọkpụkpọ agba si ikpeazụ nke media Player downloadable ọrụ. Nke a akpan akpan mgbasa ozi ọkpụkpọ e coded site na otu onye ahụ. Ọ na-nọ ruo ụbọchị na ẹkenịmde ke abụọ dị iche iche formats dị ka ọha na eze: ọkọlọtọ version, na kwa Black Edition nke coded ịrụ ngwa ngwa na-agụnye ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ. Isi nzube n'azụ a mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ doro anya na ịgbakwunye mpi na uru ma ọ bụ niche idu ke eziokwu na ọ bụ nzuzo utilizes ọhụrụ video kaadị tọhapụrụ na ga mee ngwangwa playback nke h.246 na vc-1 codec. Na-akpọ gị niile MP4 media azụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-ọhụrụ igbe ma ọ bụ akwụkwọ ahịa.
Mmepụta: MPC-HC Team
Ọzọkwa, anyị na-ahụ anyị na-emeghe-isi iyi ọzọ agafeela ndepụta dị ka ndị kasị arụmọrụ irè ọkpụkpọ, n'ihi na ọ bụrụ format agaghị akpọ na niile - arụmọrụ tụlee ka efu, na anyị niile mara otú fun na ike. Ọ bụ a ọkọlọtọ nke imewe àgwà bụghị hụrụ na ndị ọzọ egwuregwu. Ya udo nke echichi, elu nkwụsi ike, na zuru ezu enweghị mkpa codec downloads nakwa-eme ka ọ kasị mma oke maka # 1 mma free Mac MP4 ọkpụkpọ. Ee, ọ bụ bụkwa maka Mac OS nke ọtụtụ na ụdị na-ga-akpọ nnọọ banyere ihe ọ bụla na nnọọ ihe ọ bụla imewe na agba. Ọ ọbụna na-echeta gị onwe ibe edokọbara setịpụụrụ fim. VLC ọkpụkpọ na-enweghị a doro anya bụ kwụsie ike ọkọlọtọ n'ihi na ọtụtụ ọrụ.
DivX ọkpụkpọ bụ otu n'ime originators ọhụrụ codecs si n'ebe mere na ọ bụ ihe ijuanya na ha onwe ha ọkpụkpọ kemgbe-achọsi ike n'ihi na a mgbe ugbu a. Na ya ọgaranya codec akwado kasị ga-dị nnọọ na-aga na DivX ọkpụkpọ na "ka ọ na-echefu ya" ebe ọ bụ na ọ na-akwado ọtụtụ dị iche iche ụdị nke faịlụ na-agba ha pụtara rụọ ọrụ nke ọma. Ibu Ibu ugboro na kasị igbe na ji ede agbasaghị adabere na quicker n'akụkụ nke ihe bụ ezie, ọlị, ọ bụ quickest, ma n'ihi na Mac OS ọ bụ maa a na-ewu ewu ọzọ. DivX nwekwara nwere ihe karịrị otu ngwaahịa na ahịa dị ka mac ka DivX Ntụgharị nakwa plugins maka nchọgharị weebụ. Otu drawback ka nke a karịsịa ọkpụkpọ bụ enweghị akpụkpọ modding dị ka ọgwụgwụ onye ọrụ, ma dị ka anyị na-ekwu na ha bụ ndị na nkebi nke na mmejuputa atumatu ọhụrụ imewe izute arịrịọ a. Niile na ihe niile i nwere ike na-aga-ezighị ezi na DivX ọkpụkpọ maka Mac OS
Mmepụta: DivX, Inc.
Ọzọ na anyị na ndepụta nke media Player bụ Elmedia ọkpụkpọ mere dị ka Mac OS X ọrụ n'ụwa nile site Eltima Software. Nke a bụ n'ezie, n'ezie, n'ezie, n'ezie, ọ bụghị naanị ngwaahịa na Eltima bụ dị software ndepụta, nke nwere ike mmenyenjo ụfọdụ n'ime gị pụọ, ma nke a ọkpụkpọ bụ kpamkpam dị iche iche ìgwè nke ọkpụkpọ dị maka Mac ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ n'elu ikpo okwu. E wezụga inye gị zuru ezu ohere gafee a sara mbara nso nke formats: MP4, FLV, SWF, XAP (Silverlight), RV, RM, MOV, AVI, wdg ọ na-nwere zuru flash nkwado nke ya wuru na nchọgharị! M na-ịbụ kpamkpam njọ. Ị nwere ike na-ele gị fim mgbe ị sọfụ n'ihi na ihe nkiri na-ekiri. Anyị ga-n'ezie abụghị atụ aro ka ị ụgbọala mgbe na-eme nke a n'out oge ma nke a bụ ya kasị standout atụmatụ na-eme ihe n'eziokwu nwere ike ghara ịga unmentioned. Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị nke ahụmahụ ị na-achọ gị nkiri na-ekiri mgbe ahụ Elmedia bụ kwesịrị na Gaa media ọkpụkpọ.
Mmepụta: Eltima Software
5KPlayer bụkwa a ọhụrụ media ọkpụkpọ maka Mac OS na o yiri ka inwe ya n'akuku na Mac ahịa. Nke a ọkpụkpọ yiri ime ọtụtụ ihe ị ga-atụ anya a free ọkpụkpọ na kasị codec nkwado ma ya mbụ atụ ogho na free mac ọkpụkpọ ahịa bụ atụmatụ akpọrọ na airplay. Nke a na atụmatụ-enye gị ohere gị mgbasa ozi faịlụ ndepụta na-enuba ha na airplay ndị ọzọ. The 5kplayer nwere ụfọdụ ndị ọzọ n'akụkụ atụmatụ dị otú ahụ dị ka ndị dị ike ibudata media si YouTube na Facebook, na-eji 5k na-ege ntị na redio. Ndị B-n'akụkụ atụmatụ anyị mara 5kplayer na anyị na ndepụta n'ihi na nke airplay mma nke bụ ika ịpịa ọhụrụ.
Mmepụta: Dearmob, inc
Nke a yiri ka ide nke ọtụtụ Mac OS ọrụ, na n'ụzọ ziri ezi otú ahụ, dị ka ọ bụ nnọọ mụ na-abịa prepackaged na dị nnọọ nri ego nke adịchaghị ọdịnaya. Ya playable formats ndị mara mma ọtụtụ. Nanị bottleneck a ọkpụkpọ na-bụghị ihe n'ọtụtụ ebe na ya bụ na ọ bụ nanị dị na banyere 5 ma ọ bụ 6 asụsụ. English, Hungarian, Polish, Russian na Spanish nke bụ bụghị ụwa dum site igbu ogologo oge. Ọ dịghị onye na-erughị ma ọ bụrụ na ị na-eme na-ekwu okwu otu n'ime ndị a dị ka ị wee ghara asụgharị isiokwu a mgbe ahụ na-ekwesịghị a nsogbu. MX ọkpụkpọ kwesịrị ịbụ guzo a bit toro ogologo na anyị na ndepụta ma n'ezie enwereghị mgbịrịgba na whistles niile ndị ọzọ na ngwaahịa na-etinye na-atụ na-enye ha ngwaahịa na nsọtụ na VLC ugbua nwere ha adịkwa maka kwụsie ike na cross-n'elu ikpo okwu na-ewu ewu. Skinless ma mụ na-abịa na-anyị ọnụ ọgụgụ 5 ntụpọ ọcha si mpi maka Mac OS MP4 ọkpụkpọ nhọrọ.
Mmepụta: J2 Interactive
Taa, anyị na-ebi na dijitalụ afọ ma ndị mmadụ ka na-mmadụ (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọtụtụ n'ime anyị) nke pụtara na ọ bụghị anyị niile ga-kegide ihe ọkụ anya awa 24 n'ụbọchị ... ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ruo mgbe a zuru ụdịdị dị iche iche ntọhapụ nke VR Sims si windows akụrisị ahịa. Ruo ụbọchị ahụ na-abịa (oh na ọ ga-) na anyị na-aga na-, otu agadi, na-aga ndị anyị na-na na mgbe na ebe ọ bụ na anyị na mgbe nile na-aga, anyị kwesịrị a ndepụta nke n'elu 5 IOS MP4 Player for free.
Oplayer na-amalite na-enwe mmetụta dị ka top nkịta n'ọsọ a. Na ọtụtụ faịlụ formats usable site na nke a free ngwa ị ga-eche ihe mere na ọrụ na-eji ihe ọ bụla ọzọ. Na ihe karịrị n'elu 4 dị iche iche nke iyi ike formats ọ bụ ihe ijuanya na ndị ọzọ Player ọkọdọ ụkwụ nke n'elu. Nke a ọkpụkpọ bu kwa ihe-mmekọrịta ike site USB iPad na ọdịnaya downloadable site Wi-Fi ya nakwa awade media tv si ike na airplay. Dị nnọọ ka elu ya niile anya Oplayer gụnyere multiple ọdịyo egwu n'ịgwa ihe onwunwe. Atụmatụ ndị a bụ nnọọ badass niile iPhone ọrụ na bụ n'elu gen3 na isi ihe mere Oplayer na-uncontested site ọzọ oghe isi egwuregwu.
Ọzọ elu na anyị na ndepụta bụ ihe ọzọ na-akwado mmasị ọkpụkpọ akpọ rockplayer2. Awa site apụl ụlọ ahịa si a Mmepụta aha ya bụ Shanghai Tech Co. Nke a ọkpụkpọ bụ a na ndị anu si ikpere mgbe ọ na-abịa ajụkwa egwuregwu. Ọ ga-ọbụna na-ahụ ndị download na wụnye ndekọ ụzọ gị mgbe akpọ ya na gị na IOS ngwaọrụ. Nwere ike ọ gaghị nwere zuru codec format uche ma ọ karịrị eme ka elu maka na a usoro a na-akpọ RockShare. Nke a bụ oversized nkume mkpịsị aka na mbara igwe incantation-enye gị ohere kpọmkwem ịkọrọ gị media na ndị na-eji Rockplayer2 na a push nke a bọtịnụ. M nwere ike nweta a hell ya! Nke a na atụmatụ bụ nanị ihe na-eme Rockplayer2 isi na n'ubu n'elu ya bụ ụmụ mpi. Na na-ekwu ọ na-enye mgbasa ozi nkekọrịta site iTunes, ftp, http, dav nakwa airplay. Anya ka mmepe ihe na Shanghai Tech maara ihe n'ezie na ndị mmadụ chọrọ.
Mmepụta: Shanghai Tech Co. LTD
Nke a ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ meriwo multiple awards otu nke ha ịbụ ndị kasị mma media maka IPhone site Lifehacker. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezie na ị pụrụ n'anya nkume-ekere òkè gị media ma ọ bụ ọbụna gị zuru ezu achịkwa gị na-ekiri ahụmahụ site n'ime ime obodo media ohere, gị ka na-eri gị IPhone batrị na usoro. Na ike bụ kacha na ụwa nke mobile ntụrụndụ. Na niile na-akwụsị a ọkpụkpọ ga-arụ ọrụ na otu batrị Olee dị ka apple onwe mgbasa ozi ọkpụkpọ ma a di na nwunye amara atụmatụ na i nwere ike mgbe chere na ị ga-efu efu. Ihe atụ exponentially-azụ isi audio larịị ruo 12x. Nke a na atụmatụ ekwekọghị na batrị arụmọrụ bụ ọlaedo na m akwụkwọ dị ka e nwere nke ukwuu media si n'ebe na egwu mbụ olu ntọala. M nwere ike na-adịghị ọbụna mgbe a nkiri ọdụ na-esote onye na-nwere ike a oyi. 2 ma ọ bụ 3 isi uzere nwere nwere n'iyi m dum nkiri na ndụ ha. Otú o sina dị, e nwere ndị ọzọ na atụmatụ dị maka ndị na njikere ịga n'èzí apple ekara igbe. Player Oke-achọpụta rụọ UPnP iji strimụ desktọọpụ ma ọ bụ mgbasa ozi ihe nkesa ọdịnaya otú ị pụrụ ịnụ ụtọ niile gị faịlụ nri flippen 'now ... nile a oké nnọchi na kwesịrị ekwesị nke a ọnụ ọgụgụ 3 ntụpọ na anyị ngụda.
Otu ugboro ọzọ anyị na-ahụ ọzọ ọkpụkpọ leaning na airplay atụmatụ na ị kasị pụta a ikiri ahụmahụ. A otutu ọrụ na-now ịmafe Airplayit si km ọkpụkpọ n'ihi na nke enweghị Wi-Fi nkwado maka ha media na ọ dịghị onye pụrụ tojupụtara elu scalability nke Wi-Fi media mgbe ahụ airplay onwe ha. Nke a dijitalụ hocus pocus nwekwara ike-eji ihe karịrị 4G / 3G netwọk kwa. AirPlayit obụrede mbụre ya 320 faịlụ Ọkpụkpọ codecs na ike ga-streamed site airplay. Ọ bụ ezie na ya imewe abụghị nnọọ mfe na anya na ọ bụ incredibly mfe aghọta na ị bụ onye ọrụ nke i nwere ọdịnaya. Nke a na ụdị ígwè na-atụ anya-enye gị ohere ngwa ngwa hụ ihe i nwere ma ọ bụ. N'ihi ya, anya n'ebe enwebeghị sara mbara mkpesa nke nzaghachi ugboro ma ọ bụ version ikike ma ị ga-mkpa gen 4 iPad ma ọ bụ karịa. All na-eme AirPlayit abụghị ude nke akuku ma ọ ga-ekwe ka ị na-achịkwa gị mkpa na ẹkemede ndiberi edem nke ihe mbụ Mmepụta.
Mmepụta: Digiarty Software
Ọzọ dị ukwuu ọkpụkpọ na ga-enye gị tọn mkpuchi bụ km ọkpụkpọ. Dochie gị mbụ iTunes ọkpụkpọ na a ga-unu na-ekiri ọ bụla ụdị nke ọdịnaya ị na-ahọrọ ọ bụghị nanị apple proprietary media. Ọ bụ n'ihi na ya onwe nzube ochie dị ka ọ na ugbu a yiri ka onye na-adịghị ka newish ọdịnaya ma ndị ọzọ karịa na ọ bụ otu n'ime ndị ọzọ nke ka i si na nke clutches nke Apple iOS proprietary warzone. Ndepụta nke codecs bụ sara mbara ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ọhụrụ glitches ọ pụrụ ime ka o elu na nke a ndepụta. Km ọkpụkpọ bụ a ọkpụkpọ mere maka n'ụzọ kwụ ọtọ ikike gafee ọtụtụ dị iche iche nyiwe dị nnọọ ka VLC ọkpụkpọ ma na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ atụmatụ, dị ka airplay ma ọ bụ UPnP, ọ dị nnọọ ike gaghị ekwe ọ bụla dị elu na anyị rankings.
Mmepụta: KMP Pandora.tv
Na android ịbụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ hackable na-emeghe ka ọha na eze, ọchịchọ maka ngwa na-enye mgbasa ozi ihe nkesa jikọọ ikike nnọọ obere. UPnP na-ama n'ụzọ dị ukwuu na-akwado android nwekwara SDK ngwá ọrụ na Mmepụta ntọala ekwe ka ihe ndị dị ka faịlụ ftp. Ọ dịghị proprietary teepu bee kwa na-ekwu ebe a otú anyị ga-ahụ na-erughị nke a hit n'etiti ndị android obodo. Ya mere, n'ihi anyị na ndepụta anyị nwere ike ịhụ nlọghachite nke oghe isi dike si dị ka top ezie na iOS ndepụta ha bụ ọtụtụ hà ga-Hits Oplayer.
MX ọkpụkpọ bụ azụ na a ọbọ! Nke a na oge ọ bụ aka mbugharị atụmatụ nke-eme ka ọ dị ka ndị dị nakwa dị ka multiple playback formats na-ekwe ka ọ na-ewe isi ntụpọ. Ọzọkwa o nwere na arụmọrụ nke ọtụtụ n'ime ya isi atụmatụ ịbụ na isi ihuenyo otú e dịghị mkpa na azụ gburugburu n'ihi na ha na-efu gị bara uru nkiri oge. Nke a na-gụnyere ihuenyo ìhè, idaha achọ, olu na kwụsịtụ niile wuru na ihuenyo emetụ. Ọ nwere otutu sobtaitel nkwado nakwa dị ka ike iji wụnye niile codecs mkpa maka egwu na-akpọ n'elu wụnye otú mkpa maka awa nke azu maka codecs ruo ọtụtụ awa ma ọ bụ nanị ewepụghị si agugo nke nkiri .. MX ọkpụkpọ n'ezie na-ewe ya na efere na afọ a si nlereanya na anyị nwere ezigbo obi ụtọ ha mere.
Mmepụta: J2 kenkwukorita
Mgbe ndị ọzọ nile media Player maka android na-palmed otu na-enye obere mmezi accessibility. The ngwa na anyị na-ekwu okwu banyere n'ezie bụ Archos. Archos bụ a mbadamba e software mere cross nlereanya ugbu a na dị na android ahịa. Ya isi mma bụ na ọ na-anya dị ka ọ bụ GUI bụ sleek karịa ndị ọzọ. Prepackaged na zuru 5.0 Lollipop nkwado. Ọzọkwa na-enye ohere maka obere media nkesa njikọ na-ama-abịa preprogrammed na niile dị mkpa ụka n'Ịntanet formats gụnyere (SMB, UPnP, FTP, SFTP) ma ọ bụ site na mpụga USB nchekwa ngwaọrụ (SFTP / FTP nanị dị na adịchaghị / ụgwọ ngwa version); maka yanking gị video si na desktọpụ gị na ekwentị gị n'elu. Ọ bụrụ na gị mgbasa ozi bụ Karọt Top ... mgbe ahụ, m na-atụ anya dịghị protocol enyere gị, ị wildebeest. Ọ bụghị nanị na nke ahụ, ma dị ka n'oge ụfọdụ media Player na-ugbu a na mmejuputa atumatu iyi media blockers. Olee otú nke a na-aga ala m na-adịghị ọbụna mara ma ee, ọ bụ na o kwere omume na The ụmụ okorobịa na Archos nwere tipped ha paireti naaa ma kwere niile playback nke mbụ torrented faịlụ (ọ bụ ezie torrenter na-bundled na ngwa) a isi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị aga n'ihi na dị nnọọ a media ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ọ bụ gị na ruuru na-egosi naanị wee dufuo gị ikike Archos mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ nri pụọ na ya ...... .Ma na nzuzo ya mgbe e mesịrị mgbe ị na-adịghị gburugburu gị mgbochi piracy enyi.
Otu ugboro ọzọ anyị na-ahụ ebre-ndepụta nke egwuregwu topping ndepụta. VLC dị ugbu a na beta ụdị ma na-agbalị ya Mmaji Atọ-okpu na android n'elu ikpo okwu. Ọ bụghị ọtụtụ ịkpọsa dị ka ọrụ a na-eme n'ebe a ma nnọọ na GUI bụ dị ka uwe n'ihi na ụmụ okorobịa na-amasị ihe na VideoLan. Na ya egbuke egbuke oroma ngosi na media ndepụta wuru na otú ị na-adịghị na azụ n'ihi na faịlụ, nakwa dị ka netwọk gụgharia ike, o yiri ha na nri na ụzọ ha. Ọtụtụ dị iche iche codecs na-abịa bundled ebe a ugbua na n'ezie anyị nwere ike na-eche na-ahụ ihe ha ga-ewucha ya na. M na-eche ma ọ bụrụ na ị jụrụ ụmụ okorobịa na ihe VideoLan si motto n'ihi na nke a beta ntọhapụ bụ ha nwere ike ikwu ihe dị ka "adịghị asị ọkpụkpọ ... ..hate egwuregwu."
Anyị enweghị ike ịga anya na-enweghị banyere km ọkpụkpọ dị ka ihe android n'elu ikpo okwu staple. Ọ dị ya nnọọ na-eme ka ya oke mfe. Ee ọzọ dịghị extraneous atụmatụ ma ọ bụ bloatware na ee ọzọ ọma niile codec mkpuchi. 350 nde Downloaders nwere ike ịbụ na ihe ọjọọ. A ngwa ga-ọbụna ekpuchi okenye formats nke MX na VLC nwere ike ghara ọbụna aghọta. Ma ọ nwere ụfọdụ drawbacks nke na-adịghị depụtara dị ka adịghị mfe ọrụ gburugburu maka ac3 nke bụ kesaa usoro. Ọ dịghị abịa na google mbanye nkwado na bụ otu n'ime ole na ole media Player na-ekwe ka n'ihi windowed ise n'elu mode otú i nwere ike nwere ọrụ. N'ozuzu ị gaghị na-ezighị ezi na ihe ọ bụla nke n'elu 5 maka android na ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ dị oké njọ mbipụta ị pụrụ okirikiri na onye na-ahụ ma ọ bụrụ na otu dabara gị kpọmkwem ngwaọrụ. Ọ bụrụ na gị nke na-Ekwughị karọt top media ... .in nke ikpe e nwere ezughị psychiatric manpower na ụwa .... Km Player bụ maa a codec pụọ na ụfọdụ elele na anyị pụrụ ịhụ adịghị anya ga-mejuputa ọbụna fresher aghụghọ na ọnwa na-abịa.
Mmepụta: Pandora TV
Dị ka otu uzo warawara-oop a ndepụta kwukwara Bs ọkpụkpọ ka ya ọnụ ọgụgụ 5 ntụpọ maka android MP4 free video playback software. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị chere a bit cased na site Ọdịdị nke ahụ ndị ọzọ media Player Bs ọkpụkpọ bụ a siri ike ọkpụkpọ na Skin nkwado. Ee ... .user nnwere onwe. Nke ahụ nwere ike na na na naa na gị oke na-aga Droid ke akpa itie na nke a bụ ihe Bs bụ àjà ya ọtụtụ nde Downloaders. Ọzọkwa a akpan akpan ọkpụkpọ dịghị hog on processor ike. More ihe ọṅụṅụ pụtara a obi ụtọ Bro. M na n'onwe a n'ime onwe m na-elekọta mmadụ gburugburu. M nwere otu enyi na a egwu iphone5 batrị. Ọ nọgidere na-eweso iwe. Mgbe niile na-ezighị ezi. Mgbe ahụ, otu ụbọchị, ọ bụ kpam kpam Zen ... Obi nwayọọ dị ka a urukurubụba. M jụrụ ya "hey Bro ihe agbanweela ... .I iyi ka, dị iche iche ..." ka o kwuru "Oh ya, m zụtara a ọhụrụ iPhone batrị na ugbu a, m jụọla oyi ka a kukumba." Ihe ọṅụṅụ, mgbe ị ga-eleda ike nke ike. Na na ìhè na a na ngwa na-aga ime gị otu on ndụ batrị. Bs Player na-egwuregwu nkwado zuru ezu YouTube mere na ị nwere ike ibudata bụla na ihe niile YouTube videos na ị nwere ohere maka na draịvụ ike nakwa dị ka a resizable window nke na-ekiri ha na size ị chọrọ. Ọtụtụ android ọrụ na-ekwu okwu banyere ya na-wuru na sobtaitel ike nakwa dị ka ọrụ ya ịchọ ọdịnaya na i nwere maka ndepụta okwu si repositories. M na na na kpọmkwem otú a na ọrụ ma Bs ọkpụkpọ agwa gị ka ị na-aka gị ruru unyi na zuru iwu akara accessibility. Ndị a niile bụ oké ọrụ na ha onwe ha ihe ziri ezi na na ihe mere anyị biri na Bs ọkpụkpọ dị ka ọ nwere otutu plusses ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịghị nwere arụmọrụ zuru oke nke n'elu egwuregwu.
Mmepụta: AB otu
Part 2. Download Videos Free na Wondershare AllMyTube